Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zaseNigeria zokuhamba » Ukwandiswa kwehotele eNtshona Afrika: iNigeria, iCote d'Ivoire, iCape Verde ekhokelayo
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Amathuba otyalo-mali • Iindaba zaseNigeria zokuhamba • Iindaba zoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziShukumayo
Ukwandiswa kwehotele eNtshona Afrika: iNigeria, iCote d'Ivoire, iCape Verde ekhokelayo
INigeria ibambe isikhundla sayo kuphuhliso lwehotele eNtshona Afrika ngaphandle kokuncitshiswa okuncinci kunyaka ophelileyo, ngokophando lwemibhobho yehotele yonyaka.
Iinkcukacha zolu phando zigubungela iAfrika iphela, iya kuba yenye yeengxoxo eziphambili kwinkomfa ezayo eKenya.
INigeria, ingxilimbela yase-Afrika, inombhobho omkhulu eNtshona Afrika (kunye ne-2 ngobukhulu kwilizwekazi), kugxilwe eLagos nase-Abuja, ikomkhulu lezorhwebo nezopolitiko ngokulandelelana. Kukho, nangona kunjalo, liyanda inani leentengiselwano ezisayinwa kwezinye iidolophu, ezinje nge-Enugu, Port Harcourt, Onitsha neBenin City. Isantya sokwenza isivumelwano eNigeria siye sancipha, kunye nezivumelwano ezi-6 kuphela ezityikitywe kwi-2017 xa kuthelekiswa ne-10 ngo-2015 no-2016, ebonisa imeko yezoqoqosho kweli lizwe. Ukuphuculwa kwemibhobho yehotele ngokwamagumbi acetyiweyo eNigeria kwehle nge-5.1% kunyaka ophelileyo, kodwa isenamagumbi angama-4,146 eneneni asakhayo, aphuma kwitotali engama-9,603 kwiihotele ezingama-57.
Amanyathelo ancomekayo enziwe yiCote d'Ivoire, eya kumazwe amahlanu aphezulu eNtshona Afrika neehotele ezintsha ezili-10, ukonyuka ngama-205.7% kunyaka ophelileyo - ama-549 kumagumbi ayi-1,830 ewonke asesizeni. Zonke iihotele ezicwangcisiweyo ziseAbidjan, ziqhutywa zizivumelwano ezininzi ezisayinwe yiAccorHotels nangoMarriott. Oku kubonisa ukuzithemba elizweni njengoko ukubuyela kwinkululeko, emva kweminyaka eliqela yemfazwe yamakhaya, kuzise uzinzo kwezoqoqosho nakwezopolitiko, nge-IMF eqikelela ukukhula kwe-GDP nge-7.4% kulo nyaka, enye yezona ziphakamileyo kwilizwekazi.
ICape Verde igcina ukukhula ngamagumbi angama-2,710 ngoku kwisiza, enyuka nge-15.3% kunyaka ophelileyo. I-akhawunti ye-Sao Vincente ye-28% yombhobho welizwe. Olunye uphuhliso luseBoa Vista, eMindelo, ePraia, eSal naseSantiago.
ISenegal, ineehotele ezili-17 kumbhobho womnye umdlali owomeleleyo, enyuke ngeepesenti eziyi-16.2% kunyaka ophelileyo ngokwamagumbi- ama-80% aseDakar. Intsalela ikwiCap Skirring naseMbour.
UMarriott usakhokele imixokelelwane kwingingqi- iihotele ezingama-26 ezicwangcisiweyo ezinamagumbi angama-5,354 25, enyuke ngama-807% kunyaka ophelileyo. I-Louvre ikwenyuka-iihotele ezisixhenxe ezinamagumbi angama-83, ukwanda ngama-XNUMX%.
Lilonke, amatyathanga abonisa ukwanda nge-10% kwi-2017 ngamagumbi emibhobho ye-22,680 eNtshona Afrika.
Ingxelo yalo nyaka wepayipi, ngoku ikwi-10 yayoth edition, inabaxhasi abangama-41, benika ingxelo ngama-418 ejongene neemveliso ezingaphezu kwe-100 kwi-Afrika iphela. Ukusebenza konyaka kwi-Afrika iphela kwi-2018 kubonisa ukukhula, kodwa kuthe cwaka kunakwiminyaka edlulileyo- ukukhula kweepesenti ezingama-25 kwinani lamagumbi imibhobho ngo-2015; I-19% ngo-2016, kunye ne-13% ngo-2017, ngokufanayo nokukhula ngeepesenti ezili-13.5 ngo-2018.
Umthombo: Ukubonisana ngeTarsh